Uma thina benawo, ukudelela, noma nakakhulu, elinganisa ukuyiqabula njengesenzo othandekayo, sibhekene ubuhlungu babulawa. Kubonakala sengathi ukuphila ime, lutho intando kaNkulunkulu enhle esikhathini esizayo. Inhliziyo kubonakala ukulungele wavele, hhayi yokucasukela kangaka noma ukukhungatheka, kodwa kusukela ukungakwazi nokulungisa noma yini noma ubuyele emuva. Umuntu ngamunye kufanele okungenani kanye ephusheni esaphila kwakufanele isikhathi emuva. "Indlela ukusinda ukwehlukana! Oh, yeka indlela Ngifuna ubuye ... "- sithi, kodwa awukwazi ushintshe noma yini. Ngakho, ukuthi uyobhekana kanjani ukuhlukana abathandekayo, akwenziwanga lokhu umbhedo?
Lokhu kuyisinyathelo sokuqala ukubuyisela elahlekile ibhalansi engqondo. Ukuhlupheka abantu akusho ukuqaphela, kodwa kakhulu ezilimaza izinkumbulo zesikhathi esidlule noma amelana lover wangaphambili, isikhathi eside ngeke alulame. Umuntu oye waba umfokazi, kufanele ngizovele ngiyeke. Odokotela bengqondo ukweluleka ukushintsha lesi simo, isibonelo, ukuya eholidini noma ukuthuthela kwelinye idolobha. Imihlangano ezimbalwa - ngokushesha uzoqala impilo entsha egcwele.
Njengendlela yokugcina, lapho konke kungahambi kahle futhi akukho lutho olungasehlukanisa ezicezile imicabango belusizi, kuyafaneleka ukucela usizo. Hhayi izazi zokusebenza kwengqondo, mhlawumbe, njengoba abantu bakithi, ngokungafani baseYurophu, ubungcweti namanje kubangela Lokho kwakha ukungathembani, nasemikhayeni yakubo nabangane. Ubuhlungu ayidingi ukufihla futhi ngathi akekho. Ngokuphambene nalokho, uma ufuna ukukhala - ngikhale, ufuna ukukhala - ngikhale, kodwa nje eduze nomuntu olalela nenduduzo. Abangane bethu njalo wazi kahle kamhlophe ukuthi ukuze usinde ngokwahlukana kucocela isipiliyoni sabo.
Ukuhlukana - yindlela enhle ukuqala impilo entsha
Sekuyisikhathi eside uhlela ukufunda ukuze Skydive noma embroider esiphambanweni? Babefuna ukuba sifunde isiShayina noma ufunde ukushayela imoto? Lona yokwelapha engcono ukusinda break nge intandokazi umuntu. Ungenza ezemidlalo asebenzayo, ewusizo futhi kuyakhathaza, okuyinto ngeke sivumele isikhathi eside azwelane yena noma ukukhumbula esedlule. Ungakwazi ukufunda amakhono amasha - ukuya kukhompyutha izifundo, ukuqeqeshwa olunye ulimi, noma esikoleni ukushayela. Indlela ukusinda ukwehlukana kangcono futhi mnandi? usizo Omkhulu ukuze usinde ngokuhlukana ukuba zokuxhumana ofana nawo wonke umuntu kakhulu - qiniseka uhlangane nabangani, uya izivakashi, zonke ufuna, kodwa angabi yedwa. Kudingeka kuphela isikhashana ukuba adla - umsebenzi multi-day uzophela, ubuhlungu kuzophela futhi izinyembezi futhi ufuna ngilihawukele ngokwakho, okungakwazi bavunyelwe hhayi ingagxili nosizi lwabo futhi bahlale khona kuze kube phakade.
Ingozi zokuzehlukanisela liwukuthi akubona bonke abantu ngokulinganayo ngokuqinile okuhlangenwe nakho kwakhe. Ezinye impilo yonke badunyazwa nabobulili obuhlukile, abanye baqala uhlushwa nesibalo esikhulu izinhlelo ezahlukene ukuthi ungavumeli ukuba zijabule esikhathini esizayo. Kodwa kuyingozi ngisho nakakhulu lapho ukutlhaga abantu kancane ukubulala ngokwabo ngotshwala noma izidakamizwa, futhi ngezinye izikhathi owenqabayo ukuphila kuqhubeke, ukwenza isono esibi kakhulu kwesike sabonakala - ukuzibulala. Uma esasibucayi akekho kuzosiza abantu abanjalo, kungaba nemiphumela yaba buhlungu. Ukuze engalethi ngokwabo kuleso simo, kumelwe kukhunjulwe ukuthi akekho ubuhlungu ngeke zihlale phakade. Indlela ukusinda ukwehlukana? Silula - udinga nje siphile. inkumbulo Human unobubele ngokungavamile - emva kwesikhashana izinkumbulo uzobe embozwe lokukhohlwa okuncane, nokuningi - ziyolibaleka, futhi ngeke sizwakale sibuhlungu ngakho. Kulokhu, usizo olukhulu emihlanganweni entsha. Kwazi bani, mhlawumbe komngane abayitoho nobani ababehlangana kulelo izifundo olunye ulimi noma eholidini, kuzoba ama- "isikhulu wayemuhle" osimo kulindeleke iminyaka eminingi.
Umthetho Admiralty International